သတင်းစစ် . . . သတင်းမှန်များ စုဝေးရာ True News Myanmar: ရခိုင်အရေးအခင်း၌ သံသယရှိ၍ ထိန်းသိမ်းထားသော ကုလဝန်ထမ်းများ ပြစ်မှုများတွင်အမှန်ပတ်သက်မှုရှိကြောင်းနယ်စပ်ရေးရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ အပါအဝင်၊ သမ္မတက ခန့်အပ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ် ၇ မျိုး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တန်ဖိုးနှင့်အတူ စာရင်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ သမ္မတသစ် ပရာနပ်မူခါဂျီ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ပရာနပ်မူခါဂျီသည် ၄င်း၏ပြိုင်ဘက်ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌေ ဟာင်း ပါလိုဆန်မာအား အနိုင်ရရှိ၍နိုင်ငံ၏ ၁၃ ယောက်မြောက်သမ္မတြ...
အပျို၊အပျိုစစ်နှင့် အပျိုစင်........... အကြောင်း.
From : မေသဇင် အပျို၊အပျိုစစ်နှင့် အပျိုစင် ဆိုတဲ့ ဒီပို့ စ်လေးကို ညီမငယ်လေးတွေ ခွဲခြားသိမြင်အောင်လို့ရေးလိုက်တာပါ...။ မိန်း...
မကြာမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းတွင် လက်ရှိထိန်းသိမ်းထားသော ကုလသမဂ္ဂ ဝန်ထမ်းများနှင့် အိုင်အန်ဂျီအိုတို့မှ ဝန်ထမ်းများအနက် အချို့သည် အမှန်တကယ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို သက်သေအထောက်အထားများ ရရှိထားပြီးဖြစ်ကာ တည်ဆဲဥပဒေများအရ ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပြောကြားသည်။
ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဇူလိုင် ၃၀ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးတွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဌေးက “ကျွန်တော်တို့မှာ သူတို့တွေဟာ ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေအထောက်အထား ရှိထားပြီးပါပြီ။ ဒီအထဲက တစ်ယောက်က ပြစ်မှုနဲ့ မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ ထင်ရှားလို့ ပြန်လွှတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရ အဆိုပါကဲ့သို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မှုကြောင့် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းများမှ UNHCR ၃ ဦး၊ WEP မှ ၂ ဦးနှင့် အခြားသော အိုင်အန်ဂျီအိုများမှလည်း ထိန်းသိမ်းခံထားရသူများ ပါဝင်ကာ စုစုပေါင်း ၁၀ ဦးခန့် ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် UNHCR ၏ မဟာမင်းကြီး မစ္စတာအန်တိုနီ ယိုဂူတာရက်စ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းက “ပြောချင်တာကတော့ ဘယ်သူမှ ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာမရှိ ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ မောင်တောဒေသတွင် အခြေစိုက်သော ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းနှင့် အိုင်အန်ဂျီအို ဝန်ထမ်းများအနက်တွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးဦးရေသည် အထူးများပြားနေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
သတင်းစစ်. . . သတင်းမှန်များစုဝေးရာ. . . True News Myanmar
ဘလော့ဂါများစုဝေးရာ. . . . .
ဝေဖန်အကြံပေးချက်များ ရေးရန် . . .
ယခုလက်ရှိလေ့လာနေသူများ . . .
မြန်မာနေ့စဉ်သတင်းများ လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ ကချင်နေ့စဉ်သတင်း ကချင်သတင်းဌာန သျှမ်းသံတော်ဆင့် ဆုံနေကြ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ မဇ္ဈိမ ဧရာဝတီ ဧရာဝတီblog နိရဉ္စရာ နေ့သစ် အာရကန်တိုင်းမ် မြန်မာ့သားကောင်း ရွှေဟင်္သာ
ရခိုင်အရေးအခင်း၌ သံသယရှိ၍ ထိန်းသိမ်းထားသော ကုလဝန်ထ...
ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr.Tomas Ojea Quintana ဗဟ...
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုံးဝမရှိကြေ...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရေးဝန...
မိန်းကလေး တယောက်ကို အဓမ္မကျင့်တဲ့ အင်တာနက်
အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု့ စာရင်း ပြုစုတင်...
ကျွန်တော်သိတဲ့ ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခအကြောင်း တစ်ပိုင်းတစ...
မီးလောင်သွားသော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများရှိ သံဃာတေ...
ရခိုင်ပြည်တွင်း အဓိကရုဏ်းများ ငြိမ်းချမ်းနေပြီပြော...
ကေအိုင်အေ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ လက်နက်ချ အလင်းဝင...
ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့များ ညအချိန်မှာ ၀င်ရောက်ပြီးလူသစ်...
စစ်ရေးနည်း တခုတည်းဖြင့် ရေရှည်လုံခြုံမှု မတည်ဆောက်န...
ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မောင်တောခရီးစဉ်တွင်...
ဒု-သမ္မတနေရာအတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဉာဏ်ထွန်း ရေပန်းစာ...
အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ် နှစ်စောင် ယာယီ ရပ်ဆိုင်းခံရ
ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ကို ရခိုင်အချို့ ဆန္ဒ...
စစ်တပ်၊ အစိုးရနှင့် NLD တွင်ပါ ရှေးရိုးစွဲများရှိဟ...